याद गर्नुहाेस् ! यस्ताे भयाे भने क्यान्सर हुनसक्छ - ज्ञानविज्ञान
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल विश्वमा १ करोड ४१ लाख जनामा नयाँ क्यान्सर देखिएको छ । डव्लुएचओले नै क्यान्सरकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८२ लाख पुगिसकेको जनाएको छ । र यदि अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गएमा सन् २०२५ सम्म १ करोड ९३ लाख जनामा क्यान्सर देखिने अनुमान गरेको छ ।
क्यान्सर रोगको मुख्य कारक तत्वको खोजी गर्दा बदलिदो जीवनशैली, खानपान, बाताबरणीय प्रभाव प्रमुख रुपमा आउँछ । नेपालमा यी तीनवटै पक्षहरु क्यान्सर रोगका लागि अनुकुल सिद्ध भएको पाइएको छ ।
त्यसैले पनि हामीकहाँ क्यान्सरका विरामी दिनानुदिन बढी रहेका हुन् भन्न कुनै दुविधा छैन् ।क्यान्सर एक जटिल रोग हो तर पनि करिव ४० प्रतिशत क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत क्यान्सर समयमा पत्ता लगाएर उपचार गरी निको पार्न सकिन्छ ।
र बाँकी करीब २७ प्रतिशतलाई पनि उचित उपचारबाट आयु लम्याउन सकिन्छ ।त्यो कसरी सम्भव छ ? त्यसका लागि यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ? यसरी जानौँ :
के के लक्षण देखिए सतर्क हुने ?
निम्न चिन्ह तथा लक्षणहरु देखिएमा कतै क्यान्सर त भएको छैन भनि नजिकको स्वास्थ्यकर्मीकहाँ वा अस्पतालमा पुगेर देखाउने तथा सल्लाह लिइ हाल्ने गर्नुपर्छ :
महिलाहरुमा महिनावारी नभएको वेलामा रगत देखिनु, महिनावारी रोकिएका महिलाहरुको पुनः रक्तस्राव हुनु वा सहवास पछि रक्तस्राव हुनु ।
स्तनमा गाँठा गुठीहरू देखिनु, मुन्टोवाट रगत मिसिएको दुध आउनु वा मुन्टो दबिनु ।
शरीरमा गिर्खा, गाँठा गुठीहरू देखिनु ।ड्ड कोठी र मुसाहरूको रंग बदलिनु वा आकार बढ्दै जानु ।
अखाद्य रंग, रसायनिक मल, किटनाषक औषधि प्रयोग गरिएका खानेकुराहरू नखाने ।
चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुराहरू र धेरै नुन नखाने ।ड्ड धुलो,धुवाँ तथा वातावरणीय प्रदुषणबाट जोगिने ।
महिलाहरूले नियमित रुपले गर्भासय स्राव परीक्षण गर्ने ।
मौसम अनुसारको हरियो सागपात, तरकारी र फलफूल दिनहुँ खाने ।
सामान्यतः अनुशासनमा बस्ने शरीरका कोषहरुले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिन्छन् र एकाएक हतार हतार बढ्न थाल्छन् , बाँडिन थाल्छन् र त्यसले गर्दा शरीरमा समस्या आउँछ । यही क्यान्सर हो ।
क्यान्सरको अर्को नराम्रो बानी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने हो । एउटा अंगमा उम्रेको क्यान्सर छेउकै अंग अथवा टाढाको अंगमा फैलियो भने त्यसलाई मेटास्टासिस भएको भनिन्छ ।
क्यान्सर किन हुन्छ को उत्तर त्यति सोझो छैन । केही क्यान्सर वंशाणुगत हुन्छन् भने फोक्सो, मुख आदीको क्यान्सरको धेरै जसो कारण चुरोट र खैनी हो ।
हामीले हेर्ने यस्ता क्यान्सरका बिरामी मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा धेरैले चुरोट वा खैनी खाएका हुन्छन् । मैले क्यान्सर मात्र हेर्न थालेको ५ बर्षमा चुरोट/खैनी नखाएर पनि फोक्सो र मुखको क्यान्सर भएका बिरामीहरू निकै कम भेटेको छु ।
सोझै भन्नु पर्दा चुरोट वा खैनी नखाने मान्छेलाई फोक्सो वा मुखको क्यान्सर हुने संभावना निकै कम हुन्छ । अन्य जोखिमहरूमा मोटो शरीर, वातावरणको प्रदूषण, खानामा प्रयोग हुने केमिकल र कीटनाशकहरू पर्छन् ।
रेडियोथेरापी भनेको रेडियसनको प्रयोगले क्यान्सरको उपचार गरिने प्रविधिलाई भनिन्छ । नेपालीमा रेडियसनलाई विकिरण भनिन्छ, सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा, अलि बढि ताकतका एक्स-रे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।
रेडियोथेरापी गर्ने विभिन्न मेसिनहरु हुन्छन् र उपचार केही मिनेट प्रति दिन, हप्तामा ५ दिन गरेर, ६ हप्ता जति हुन्छ । खोई किन हो, रेडियोथेरापी लाई हाम्रा बिरामीहरूले ‘सेकाई गर्ने’ भन्नुहुन्छ। यो शब्द आफैंमा गलत छ, किन भने रेडियोथेरापी गर्दा पोल्दैन, न त दुख्छ, बिरामीले केही थाह पाउनुहुन्न ।
रेडियोथेरापी सुरु गरेको २-४ हप्तामा कसै कसैको छाला अलि कालो हुन सक्छ । अरु प्रतिकूल असर के हुन्छन् भन्ने कुरा रेडियोथेरापी कुन अंगमा गरिँदैछ मा भर पर्छ । धेरै जसो बिरामीहरूले रेडियोथेरापी सजिलै लिनुभएको मैले पाएको छु ।
नेपालमा क्यान्सरको अपरेसन धेरै वटा अस्पतालमा हुन्छन् र किमोथेरापी पनि धेरै वटा अस्पतालमा लगाउन मिल्ने भएको छ । क्यान्सरको उपचारमा आजकल निकै प्रगति भएको क्षेत्र रेडियोथेरापी हो । नेपालमा नपुग्दो हुने गरि थोरै भएको पनि रेडियोथेरापी नै हो ! रेडियोथेरापी हुने नेपालमा जम्मा ४ वटा अस्पताल छन् ।
सबै भन्दा पुरानो, बीर अस्पताल हो, त्यस पछि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल । भरतपुर स्थित क्यान्सर अस्पताल र मणिपाल कलेज पोखरामा पनि यो सेवा उपलब्ध छ ।
यो बाहेक भक्तपुरमा निजी लगानीमा काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर खुलेको छ जसमा नयाँ प्रविधिको रेडियोथेरापी र किमोथेरापी गरिन्छ । हरिसिद्धिमा पनि नेपाल क्यान्सर अस्पताल खुलेको छ जसमा क्यान्सरको सबै उपचार सम्भव छन् ।
मैले काम गर्ने ग्राण्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालले पनि क्यान्सरमा लगानी गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ, अपरेसन र किमोथेरापी सेवा दिइरहेको यो अस्पतालमा रेडियोथेरापी पनि थपियो भने हामी पनि साच्चिकै क्यान्सरको उपचार गर्न सक्षम अस्पताल हुनेछौं ।
क्यान्सरको उपचारको क्षेत्रमा हरेक दिन केही न केही नयाँ आइरहेका हुन्छन् । केही दशक अघि पार पाउन नसकिने भनिएको क्यान्सर बेलामै भेटिए निको हुन थालेको छ ।
विश्वास के गर्न सकिन्छ भने बर्षहरु बित्दै जाँदा, नयाँ औषधि, नयाँ प्रविधि आउनेछन् जसले गर्दा क्यान्सर पनि सजिलै निको हुने रोग हुनेछ र समाजमा रहेका नकारात्मक कुराहरू कम हुँदै जान्छन् ।
माथि उल्लेखित बाहेक नेपालमा अन्य नयाँ क्यान्सर अस्पताल खुल्ने तरखरमा छन् । टिचिङ अस्पतालले धेरै वर्ष भयो कोसिस गरिरहेको । निजामती अस्पतालमा पनि खुल्ने रे भनेको सुनिन थालेको छ ।
निजामती अस्पताल मै नेपालमा पहिलो पटक बोन-म्यारो प्रत्यारोपण गरेर रक्तक्यान्सरको सफल उपचार पनि सुरु भएको छ । यसरी नै नयाँ सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पतालहरू नेपालका विभिन्न भागमा खुल्न थाले भने नेपालमै सजिलै उपचार सम्भव होला क्यान्सरको ।
Don't Miss it सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत नङकाे रङले पनी देखाउछ
Up Next कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? याे तरिका अपनाउनुहाेस्